Samui Airport Inoona Yekutanga Vashanyi Vepasi Pose Kubva Lockdown
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Thailand Kuputsa Nhau » Samui Airport Inoona Yekutanga Vashanyi Vepasi Pose Kubva Lockdown
nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • nhau • Kuvakazve • Thailand Kuputsa Nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Akasiyana Nhau
Kugamuchirwa kuSamui Airport
Boka rekutanga revatorwa rakamira paSamui airport paKoh Samui muThailand pasi peiyo Samui Plus Model chirongwa.
Iyo projekiti inosanganisira Koh Samui, Koh Phangan, uye Koh Tao zviwi zvedunhu reSur Thani.
Vafambi vese vakapfuura nepakati pekushandisa mashandiro ekufambisa uye ehutano zvinhu.
Vashanyi vanozoiswa kwavo vega kwemazuva manomwe kuAnquarantine mahotera kwemazuva matatu ekutanga uye vachikwanisa kufamba munzira dzakavharwa mushure menguva iyoyo.
Boka rekutanga revashanyi vekunze raisanganisira vangangoita gumi veYouTubers zvine chekuita nekushanya nemablogi kubva kuAsia neEuropean nyika dzakakokwa neHurumende Chiremera cheThailand (TAT).
Aigamuchira vashanyi, aive Thanet Phetsuwan, Mutevedzeri Gavhuna weKushambadzira Kutaurirana ku Tourism Tourism ye Tairendi. Vafambi vese vakapinda muStanding Operating Procedure (SOP) iyo yaifukidza zvifambiso zvavo nehutano, akadaro.
Sekureva kwaVa Thanet, vashanyi vachagara kuArea Quarantine (AQ) mahotera kwemazuva matatu. Kune 3 mahotera ane angangoita mazana mana emakamuri zvachose anopa sevhisi iyi.
Kubva pazuva rechina kusvika zuva rechinomwe, ivo vanokwanisa kufamba pa "Yakavharwa Nzira" nemakambani ekushanya akasimbiswa kune iyo Samui Plus standard.
Iyo Samui Plus Model inogona kusakwanisa kutarisira vashanyi vakawanda sevaya vari muPhuket Sandbox chirongwa asi yakaudza nharaunda yepasi rose kuti Koh Samui uye zviwi zviri pedyo zvaive zvakagadzirira kugamuchira vashanyi vekunze uye kuvimbisa kuchengetedzeka kwavo, VaThanet vakati.
Hutano matanho eSamui Plus Model aive akaomarara kupfuura ayo ePhuket, akadaro.
Pasi peiyo Samui Plus Model, vachengeti vanochengetwa vanogona kubhuka kufamba pasi pechirongwa cheSealed Route sezvo kunyoreswa kwetifiketi rekupinda (COE) kwakavhurwa neMuvhuro, Chikunguru 12, 2021.